कालोबजारी प्रकरण: सुलभ अग्रवाललाई किन लागिएन अदालत? - Deshko News Deshko News कालोबजारी प्रकरण: सुलभ अग्रवाललाई किन लागिएन अदालत? - Deshko News
कालोबजारी प्रकरण: सुलभ अग्रवाललाई किन लागिएन अदालत?
कोरोना संक्रमणको त्रास तथा लकडाउनको मौका छोपेर कालोबजारी गर्न उद्यत व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन हरसम्भव प्रयास भएको छ । कानुनको लुप्त प्वालबाट छिरेर अग्रवाललाई कारबाहीबाट जोगाउन शुरूदेखि नै मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा २० हजार थान थर्मल गन अग्रवालले भित्र्याएको भन्ने कुरा प्रहरीबाटै सार्वजनिक भएको भए पनि अग्रवाल पक्राउपछि १ हजार २ सय वटाको मात्रै लगत देखाइनु र कारबाहीको निम्ति अदालती प्रक्रियाबाट नगएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् जानुले अग्रवाललाई कम सजाय गराउने प्रपञ्चको रहस्योद्घाटन भएको छ । अदालतबाट गए पाँच वर्षसम्मको जेल हुनसक्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गए बढीमा एक वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण अग्रवालमाथि सहानुभूति राख्ने काम गरिएको हो ।
सुवास अग्रवालका नाममा अवैध कारोबार गर्दै आएका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि मात्रै सुलभ अग्रवाल शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा स्टिलका प्रवद्र्धक भएको रहस्य खुलेको थियो । सुलभ अग्रवाल भन्ने थाहा पाएपछि उनलाई बचाउन राजनीतिक कसरत शुरु भयो, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सीएनआईका उच्च पदाधिकारीहरु उनलाई बचाउन हात धोएरै लागेपछि कारबाहीको स्वरुप नै बदलियो ।
प्रहरीको ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट पक्राउ परेका अग्रवाललाई अदालतमा उपभोक्तासम्बन्धी कानुनअनुसार पेस गरेको भए कडा कारबाही हुन सक्थ्यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दा चलाएर उनलाई जोगाउन उच्च राजनीतिक एवम् व्यावसायिक दबाब परेकाले मुद्दा कमजोर बनाउन चलखेल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरी भ्यानको सिसासमेत तोडफोड गर्ने र मिडियामा समेत निक्कै चर्चामा आएको घटना भएकाले अग्रवाललाई मुक्त नगर्न नसके पनि कारबाही न्यून गराउने खेल भएको स्रोतको दाबी छ । पक्राउ गर्दा प्रहरीलाई ‘म को हुँ, चिनेको छ’ भनेर प्रहरीमाथि नै दुव्र्यवहार गर्ने उनीमाथि अहिले सहानुभूति बर्सिएको छ ।
स्रोतले भन्यो– ‘महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेका अग्रवाललाई अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाइएको छ । यसबीचमा ठूलो परिमाणमा थर्मल गन गायब बनाउनेदेखि मुद्दाको प्रकृतिमा समेत चलखेल भएको छ । जसका कारण अग्रवालमाथिको अनुसन्धान नै फितलो बन्दै गएको छ ।’ अग्रवालले बेपत्ता पारेको अन्य थर्मल गनकाबारे प्रहरी अझै बेखबर छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले भने प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताए । उनले प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको छ, बाहिर हल्लामा आएजस्तो अनुसन्धानमाथि नै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने– ‘अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको घटनामा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि के भन्न सकिन्छ भने हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ बाहिर अनुसन्धानमा शंका उब्जिएकोबारे उनले थपे– ‘कसले के शंका गरेका छन्, किन शंका गरेका छन्, उनैलाई गएर सोध्नुहोला, हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं ।’
सुलभले एयरपोर्टको भन्सार कार्यालयमा बीजक बुझाएअनुसार चीनमा २० डलर तिरेर ल्याएको थर्मोमिटर १५ हजार रुपियाँमा ग्राहक बनेर प्रस्तुत भएका प्रहरीलाई नै बेचेका थिए । चैत २५ गते रंगेहात पक्राउ परेका उनलाई बैशाख २ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पाँच दिनको म्याद थपेर कारबाही चलाएका थिए ।
यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन प्रजिअ दाहालसँग नेपाल समाचारपत्रले बिहीबार सम्पर्क गर्न बारम्बार प्रयास ग¥यो, तर कुरा हुन सकेन । नेपाल समाचार पत्रबाट